Israely: Tsy nanaiky hamoaka dokambarotra manasongadina ny fitarihan’ny vehivavy Israeliana ny Ms. Magazine · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Desambra 2018 15:05 GMT
Tamin'ny fihetsika mahagaga tamin'ny herinandro lasa, tsy nanaiky ny dokambarotra nanasongadina ny fitarihan'ny vehivavy Isiraeliana amin'ny fanompoam-bahoaka ny Ms. Magazine. Ny pejy feno misy ny dokambarotra tohanan'ny Kaongresy Jiosy Amerikana dia nanasongadina ireo vehivavy Isiraeliana telo miavaka miaraka amin'ny fanambaràna hoe “Israely ity”, tamin'ny tarehintsoratra lehibe sy matevina. Nahitana an'i Tzipi Livni ireo vehivavy malaza ara-politika, izay praiminisitra lefitra sady minisitry ny raharaham-bahiny, ary koa i Dorit Beinisch, filohan'ny Fitsarana Tampon'i Israely, ary Dalia Itzik, mpitondratenin'i Knesset.
Tzipi Livni Praiminisitra lefitra sady Minisitry ny raharaham-bahiny
(Tsy misy sary) Dorit Beinisch Filohan'ny fitsarana tampony
Dalia Itzik Mpitondratenin'i Knesset
Voalaza fa nilaza tamin'ny Kaongresy Jiosy Amerikana i Susie Gilligan, solontenan'ny gazetiboky hoe: “[Te] hanana dokam-barotra avy aminareo momba ny fanomezam-bahana ny vehivavy, na fahalalahana ara-pananahana izahay, fa tsy momba ity lohahevitra (fanasongadinana ireo vehivavy mpitarika) ity.”
Nanazava bebe kokoa ny fandavàna ny tale mpanatanteraky ny gazetiboky, Ms. Magazine, Katherine Spillar, hoy izy “Satria ny roa tamin'ireo vehivavy dia avy amin'ny antoko politika iray ihany, dia takatray fa resaka politika izany. [Ny gazetiboky] dia tsy miditra amin'ny politika anatiny [avy amin'ny firenena ivelany]. “
(Avy amin'ny Antoko Kadima ny Praiministra lfitra Livni sy mpitondratenin'i Knesset, Itzik.)
Nilaza ny filohan'ny Kaongresy Jiosy Amerikana, Richard Gordon hoe: “Ny fehin-kevitra tokana azo tsoahina amin'ity fihetsika ity dia mahatsapa ny gazetiboky fa ny dokambarotra manasongadina ny zava-bitan'ireo vehivavy telo mahatalanjona mana-talenta sy nanolo-tena dia mety hanafintohina ny mpamakiny. Satria tsy nisy zavatra manafintohina akory amin'ny dokambarotra, mazava ho azy fa amin'ny fampisehoana ny zom-pirenen'ireo vehivavy dia mety ho hitan'ireo mpamaky azy ho mampisalasa ny fitantanan'ny Ms magazine. Amin'ny famoahan-taratasy izay mampiseho ny tenany ho lohalaharana amin'ny Hetsiky ny Vehivavy, dia tena maharikoriko sy tsinontsinona izany,”
Miaka-peo ireo bilaogera–
Raha jerena ny fanehoan-kevitry ny tontolon'ny blaogy Israeliana sy jiosy momba ity tantara ratsy ity, dia nanamarika i Aimee Kligman, bilaogera ao amin'ny Women's Lens hoe:
“Heveriko fa tsy mila ny Ms. Magazine isika amin'izany, satria velona sy salama ao amin'ny tontolon'ny bilaogy ity dokambarotra ity .”
Ny mpanoratra ny bilaogy Hashmonean blog indray manasongadina dika mitovy amin'ny dokambarotra, ary naneho hevitra hoe:
“Ity ny dokambarotra izay nolavin'ny gazetiboky izay araka ny fahatakarako, toa mampiadihevitra loatra izy io. Manasongadina vehivavy telo Israeliana malaza mitàna toerana ambony izany mba hanehoana ny fiarahamonintsika malalaka sy mirazotra izay tiana sy heverina fa mahavita azy ny vehivavy amin'ny ankapobeny (afaka mitondra basy ihany koa izy ireo, heverinao fa Lamekan'ny Feminista ato amin'ny tany masina izany! “) Toa tsy izany anefa.”
Mariho fa tamin'ny tarazon'ny mpitarika eo amin'ny seha-panjakana avy amin'ny tontolon'ny tafika sangany dia i Dorit Beinisch no lietnà voalohany tao amin'ny Tafi-piarovana Israeliana ary i Tzipi Livni no manamboninahitra IDF izay niasa tao amin'ny Mossad, sampam-pitsikilovana Israeliana.
Avi Green avy ao amin'ny Tel-Chai Nation mino fa misy ny:
“… mizàna tsindrin'ila asongadin'ny Ms. Magazine, izay tsy mety namoaka dokambarotra manasongadina vehivavy telo mitàna toerana ambony eo amin'ny politika sy governemanta Israeliana avy amin'ny elatra ankavia -averiko indray-ELATRA HAVIA: Tzipi Livni, Dorit Beinish [sic], ary Dalia Itzik. Tena ratsy izany, satria mampiseho fa mankahala an'i Israely ny Ms.na dia ireo havia aza no hifantohana. “
Solomon ao amin'ny Solomonia maneho hevitra momba ny fanazavan'ny Ms. mikasika ny fandàvany ilay dokambarotra, hoy izy:
“Fialan-tsiny mampihomehy. Tsy maningana i Tzipi Livni satria vehivavy israeliana malaza izy, mahatalanjona i Israely ao amin'ny faritra misy azy satria malaza ny vehivavy (ary ao Israely, tsy zava-maningana ny maha-lahy sy vavy
Tsy i Livni, Beinisch, sy Itzik ihany no vehivavy malaza ao Israely. Galia Maor no tale jeneralin'ny Bank Leumi, banky nasionalin'i Israely, Ester Levanon no filohan'ny (Tsenambola) Tel Aviv Stock Exchange, ary Dalia Narkiss no mitantana ny Manpower, sampana lehibe indrindra momba ny asa ao Israely. Ankoatra izany, Golda Meir no praiminisitra fahaefatra Israeliana ary vehivavy voalohany tamin'izany toerana izany, nanomboka tamin'ny taona 1969 ka hatramin'ny taona 1974 (sary eo ankavia). Ary tsy izay ihany, ny medaly volamena voalohany tamin'ny Lalao Olaimpika dia azon'i Yael Arad tamin'ny judo tamin'ny taona 1992.
Inona àry no hevitrao? Tokony nanome fahafahana ho an'ny Kongresy jiosy Amerikana ve ny gazety mba hamoaka ilay dokambarotra amin'ny endrika hafa? Nohitarina loatra ve ny olana? Moa ve tena anti-Isiraely araka ny filazan'ireo bilaogera ny Ms. Magazine? Inona no tokony natao mba hisorohana ity tranga iraisam-pirenena ity?
Andeha renesina izay lazainareo.